विश्वकप छनोटमाः- फ्रान्स र स्वीडेन विजयी , नेदरल्याण्डस पराजित » खबरहरुको एउटै केन्द्र
विश्वकप छनोटमाः- फ्रान्स र स्वीडेन विजयी , नेदरल्याण्डस पराजित
आईतवार, चैत्र १३, २०७३ ०६:०३ मा प्रकाशित !
१३ चैत​,काठमाडौं । विश्वकप छनौट अन्तर्गत युरोपियन क्षेत्रको छनौटमा फ्रान्सले लग्जेम्बर्गलाई पराजित गरेको छ । सन २०१८ को रुसमा हुने विश्वकप छनोट अन्तर्गत शनिबार राति भएको खेलमा फ्रान्सले लेग्जेम्बर्गलाई ३–१ ले पराजित गरेको हो ।
फ्रान्सले खेलको २८ औं मिनेटमा जिरउडको गोलबाट सुरुवाति अग्रता लिएको थियो । ३४ औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै औरेलिएन जोएचिमले लग्जेम्बर्गका लागि बराबरी गोल फर्काए ।
तर, त्यसको तीन मिनेट नबित्दै ग्रिजम्यानले पाएको पेनाल्टीमा गोल गरेपछि फ्रान्सले पहिलो हाफमा २–१ को अग्रता बनायो । त्यसपछि दोस्रो हाफको ७७ औं मिनेटमा जिरउडले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि फ्रान्सले ३–१ को जित निकाल्यो ।
शनिबार राती नै भएको खेलमा स्वीडेनले बेलारुसलाई ४–० ले पराजित गरेको थियो । स्वीडेनको जितमा इमिल फोर्सबर्गले दुई तथा बेर्ग र थिलिनले समान एक एक गोल गरेका थिए ।
जितसंगै युरोपियन क्षेत्रको छनौटको समूह ‘ए’ को शीर्ष स्थानमा रहेको फ्रान्सले पाँच खेलबाट १३ अंक जोडेको छ। दोस्रो स्थानको स्वीडेनको १० अंक छ । यो खेलसंगै ९ अंकको बुल्गेरिया तेस्रो स्थानमा छ । नेदरल्याडसको ७ तथा बेलारुसको २ अंक छ ।
PREVIOUS POST Previous post: विश्वकप फुटबल छनोटमाः- पोर्चुगल र स्वीटजरल्याण्ड विजयी
NEXT POST Next post: संविधान कार्यान्वयन र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन निर्वाचनको विकल्प छैनः- पोख्रेल
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, चैत्र १३, २०७३ ०६:०३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, चैत्र १३, २०७३ ०६:०३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, चैत्र १३, २०७३ ०६:०३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, चैत्र १३, २०७३ ०६:०३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, चैत्र १३, २०७३ ०६:०३